Akhriska Badan Iyo Qiimiisa - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Akhriska Badan Iyo Qiimiisa
xogside – Iyadoo gudaha ugu jirta Maktabadda aabheed ayay aragtay wiilkii ay guurka ku heshiiyeen oo soo gelaya , iyadoo aabaheed wakhtigaasi dhinac taagna.
Ka dibna si sarbeeb ah ayay wiilka ugu tidhi : “ Ma waxaan ka iibiyaa Buuga aad doonaysay ee magaciisu ahaa: “ Aabo ma jooga guriga“ ee uu qoray Shakespeare. Iyadoo u cadaynaysa inuu aabaheed yahay ninka agtaagani.
Wiilka ayaa ku jawaabay :” Maya, waxaan rabay Kitaabka magaciisu ahaa “Xagee haboon inaan kugu arko” ee uu qoray qoraaga Ingiriiska ee Thomas.
Inantii ayaa ugu jawaabtay :” Ma yaallo Kitaabkaasi, laakiin waxaan hayaa kitaabka la yidhaa , “Geedka Cambaha hoostiisa” ee uu qoray qoraaga Patrice Oliver ee Maraykanka ah “. Iyadoo u cadaynaysa goobta kulanka.
Aabaheed oo maqalaya ayaa inantiisa ku yidhi: “ Aabo waxan uu Kutub iyo buugaag ah ah miyaad akhrideen “?. Waxaana ay ugu jawaabtay “ haa waan akhriyay “.
Waxayna sii raacisay: “Aabo wiilkuna waa mid akhris badan oo caqli badan, kama daallo akhriska, waana dadaal badan yahay, buugta wuu inaga iibsadaa had iyo jeer”.
Aabaheed ayaa ugu jawaabay: ”Aabo inantayday waad fiican tahay, laakiin waxa wanaagsan inuu akhriyo isagu kitaabka la yidhaa :” Ma ahi Nacas, waan fahmaa wax kasta “ ee uu qoray qoraaga Frank Martinez oo Holand u dhashay” Isagoo uu muujinaya inuu qisada fahmay. Adiguna aabo waxaad akhridaa kitaabka la yidhaa :” U diyaar Garow guur Berri” ee uu qoray qoraaga Ruushka ee Maurice Henry. Isagoo u cadaynaya inuu berri nin u guurin doono. Dadka Akhrisku way is fahmaan.
Previous articleXirfadaha Tuugada Ee Kala Duwan
Next articleDhagax dhiga xarunta ciidanka Dab demiska degmada Gacan libaax oo maanta la dhagax dhigay.